အိန္ဒု - ကော့ကရိတ်လမ်းကို ကန့်ကွက်ရန် နှိုးဆော်သူအချို့ကြောင့် ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးစေသည်ဟု ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပြော - Hintharmedia
အိန္ဒု – ကော့ကရိတ်လမ်းကို ကန့်ကွက်ရန် နှိုးဆော်သူအချို့ကြောင့် ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးစေသည်ဟု ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပြော
ကရင်ပြည်နယ်၏ အဓိကအရေးပါသောဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် အိန္ဒု-ကော့ကရိတ်လမ်းပိုင်းစီမံကိန်းကို ရပ်တန့်စေရေး လာရောက်နှိုးဆော်သူအချို့ကြောင့် ပြည်နယ်၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကြန့်ကြာစေသည်ဟု ပြည်နယ်ဝန်ချုပ် နန်းခင်ထွေးမြင့်က ဆိုသည်။
” အမှန် လွန်းညရွာသားတွေက အဲလောက်မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒီကို လာတဲ့လူတွေမှာသာ ပယောဂတွေ ပါလာတာ”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင် သြဂုတ် ၁၈ ရက်က သတင်းမီဒီယာများကို ယင်းသို့ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါလမ်းပိုင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုလည်း ယင်းနေ့က ဖော်ပြပါရုံး၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
လမ်းစီမံကိန်းကို အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) မှ ချေးငွေထုတ်ပေးပြီး ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲ အရှေ့-အနောက် စီးပွားရေး စြင်္ကန်လမ်း၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်ရန် China Road and Bridge Corporation -CRBC ကုမ္ပဏီကို ဆောက်လုပ်ခွင့် ပေးအပ်ထားကာ စီမံကိန်းကာလအနေဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ခုနှစ်အထိ လျာထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
လတ်တလောတွင် အဆိုပါ လမ်းပိုင်းဖောက်လုပ်နေမှုမှာ ရပ်တန့်နေကြောင်း၊ ADB မှ ဘတ်ဂျက်ငွေ ချပေးခြင်းမရှိတော့သည့်အတွက် လမ်းပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်ထားကြောင်း သိရသည်။
CRBCမှ ဦးဇေယျာဖြိုးက ပျက်စီးနေသည့် လမ်းနေရာများတွင် ယာဉ်များ သွားလာနိုင်ရေးအတွက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ ညွန်ကြားချက်အရ တစ်ပတ်အတွင်း အမြန်ဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
အဆိုပါ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ ပြည်နယ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊သတ္တု၊သစ်တောနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးစောပြည်သာ၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီး ဦးတေဇထွဋ်လှိုင်ထွေး၊ လမ်းဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများ၊ CRBC ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ရှင်းလင်းခဲ့ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်မှာ အဆိုပါလမ်းကို စီမံ/ဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနသဘောတူ
ညီချက်ဖြင့် လမ်းဦးစီးဌာနမှ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြောင်း၊ ADB ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ နိုင်ငံတကာမှ တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ကြောင်း၊ ဒေသခံများ လိုအပ်ချက်အတိုင်း ရေစီးရေလာ၊ လျော်ကြေးကိစ္စများ၊ လမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း ပါဝင်သည်။
ယင်းအပြင် လမ်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အရေးပေါ်ရှိလာပါက လမ်းဦးစီးဌာန လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်သူရထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြောင်း၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့်လည်း လက်ပိုက်ကြည့်နေခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ သွားလာရေးအဆင်ပြေစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း စသည်ဖြင့် တာဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးကရင် ဒေသသင်ရိုးညွှန်းတမ်းရေးဆွဲရေး ဆွေးနွေး
918kiss pc September 13, 2018 at 4:36 PM
Let me say one thing before I let you leave. Check your local shops free
TV Guide for advertisements about contests. After obtaining
information, we sat in regards to the floor to ready our glose.